La kulan – Tima-jaraha darbi-jiifta lacag la’aan ku qurxiya! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / La kulan – Tima-jaraha darbi-jiifta lacag la’aan ku qurxiya!
Muqdisho – Mark Buston oo ah ra’iisle reer New York, wuxuu leeyahay qalbi dahab ah. Wuxuu maalintiisa Axadda – oo ah tan kaliya uu fasaxa ka yahay howsha – uu si lacag la’aan timaha ugu jaraa dadka dib-jirta ‘darbi-jiifta.’ Sheekadiisa naxariista leh waxay taniyo sanadkii 2014 ku baahday baraha bulshada sida Instagram oo uu soo dhigo sawirrada wax-qabadka maalintaas.
Next: La kulan – Indhoole iyo gacmo laawe saaxiibo ah oo wadajir u beeray geedo badan.